फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना, विज्ञ भन्छन्- कडाइ नगरे अझै बढ्छ :: Setopati
विवेक राई काठमाडौं, साउन १२
मंगलबार डेढ महिनायताकै धेरैमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गएको २४ घण्टामा ३ हजार ८९९ जनामा संक्रमण देखिएको छ।
गत असारको पहिलो सातादेखि साउनको दोस्रो सातासम्म स्थिर रहेको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको हो। उक्त अवधिबीच दैनिक २ देखि ३ हजार जनामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। तर असार ११ गतेदेखि भने दैनिक संक्रमित ३ हजार नाघ्न थालेको छ।
हिजो (सोमबार) मात्र ३ हजार ४२१ जना संक्रमित थपिएका थिए। आज फेरि त्यो संख्या बढेर ३ हजार ८९९ पुगेको छ। अझैं यो संख्या बढेर जाने विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद् डा. सरद वन्तले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि सबै क्षेत्र चलायमान भएको छ। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना भएको छैन। जति जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना हुन्छ, त्यति नै संक्रमण खुम्चिदै जान्छ र जति पालना कम हुन्छ, संक्रमण त्यति नै बढ्दै जान्छ।’
सरकारले पनि पछिल्लो समय संक्रण बढेको संकेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि संक्रमण बढ्न थालेको र तेस्रो लहरको जोखिम रहेको भन्दै सातै वटा प्रदेशलाई अक्सिजन सिलिण्डर भरेर तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ। हिजो (सोमबार) सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सातै प्रदेशलाई कम्तिमा एक हजार वटा अक्सिजन सिलिण्डर तयारी अवस्थामा राख्न भनेको छ।
जनस्वास्थ्यविद् वन्तले अहिले संक्रमण फेरि बढ्नुमा मुख्यत जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नै नहुनु रहेको बताए। उनले अहिले पनि संक्रमणको स्रोत समुदायमा चलायमान रहेको भन्दै ती स्रोतहरूबाट संक्रमण फैलिरहेको जनाए।
‘अहिले देखिएका मात्र पनि २५ देखि ३० हजार जना सक्रिय संक्रमित समुदायभित्र छन्। ती भनेका संक्रमणका स्रोत हुन्। अझ पहिचान नभएका त्यस्ता संक्रमितहरू समुदायमा कति छन्- छन्। त्यसैले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नहुँदा ती स्रोतबाट संक्रमण फैलिरहेको छ,’ उनले भने।
सरकारले अहिले निषेधाज्ञालाई जारी राखेपनि अधिकांश क्षेत्रहरू खुला गरेको छ। यद्यपि यी क्षेत्र खुला हुँदा त्यहाँ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड भने कडाइका साथ पालना नभएको डा. वन्त बताउँछन्। उनले अहिले बजार लगायत भिडभाड हुने क्षेत्रमा सर्वसाधारणले कडाइका साथ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरेको सुनाए।
‘बजार खुल्यो भन्दैमा भीड गर्नु जरुरी छैन। सरकारी कार्यालयहरूमा त्यस्तै भिडभाड छ,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘हो सधै लकडाउनमा बाँधिएर बस्न सकिँदैन। तर सामान्य अवस्थामा फर्किनुको मतलब विगतकै जस्तो गर्नु भन्ने हैन नि।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत पटकपटक संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने बताउँदै आएको छ। तर यसपटक संक्रमणको नयाँ लहर आएपनि त्यसबाट विगतको जस्तो क्षति हुन नसक्ने डा. वन्तको बुझाइ छ। उनले भने, ‘दोस्रो लहरका बेला हाम्रो तयारी साह्रै कमजोर थियो। पहिलो लहरमा हामी त्यति भयवित हुनु नपरेकाले पनि दोस्रो लहरले त्यति धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने आँकलन गरिएन। तर दोस्रो लहरपछि भने धेरै तयारीहरू भएका छन्।’
डा. वन्तले तेस्रो लहर आइहाले त्यसले दोस्रो लहर जस्तो क्षति नगर्ने थप केही कारणहरू औंल्याएका छन्। जसमध्ये पहिलो कारण भनेको यदि तेस्रो लहरमा पुराना भेरियन्टलाई ‘बाइपास’ गर्ने कुनै नयाँ भेरियन्ट नआए दोस्रो लहरमा जस्तो संक्रमण ह्वात्तै बढ्दैन। उनले धेरै मुलुकहरूमा दोस्रोपछि तेस्रो लहर आउँदा त्यो तहको क्षति नभएको बताए। उनले धेरै मानिसहरू संक्रमित भइसकेको र खोप लगाइसकेकाले पनि त्यो तहको क्षति नहुने उल्लेख गरे।
‘धेरैमा त संक्रमण भएर पनि प्राकृतिक ‘एन्डिबडी’ बनिसकेको छ। जसले भाइरसविरूद्ध लड्न काम गर्छ। साथै कतिले खोप पनि लगाएका छन्। त्यसले गर्दा पनि तेस्रो लहरमा त्यो तहको क्षति नहोला कि’ उनले भने।
तर त्यसो भन्दैमा तेस्रो लहरलाई कम आँकलन गरेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा कति पनि हेलचेक्राइ गर्न नहुने डा. वन्तको सुझाव छ। उनले अहिले नै संक्रमण बढिरहेकाले थप सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै अहिले नै सतर्क रहनसके संक्रमणको जोखिम कम हुने बताए।
संक्रमण फेरि बढ्न थालेपछि लकडाउन कडाइ हुन्छ भन्ने आम जिज्ञासाबारे भने डा. वन्तले अहिले नै लकडाउनलाई कडाइ गर्ने बेला नभएको जनाए। ‘अहिले पनि लकडाउन नै छ। लकडाउन भनेको अन्तिम र बाध्यकारी विधि हो। तर त्यो भन्दैमा फेरि लकडाउनलाई कडाइ गर्दै जानुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न। त्यो भनेको हामीले जनस्वास्थ्यको पालना कति गर्छौं भन्ने कुराले तय गर्छ।’
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन १२, २०७८, १८:२७:००